Dowladda Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya usoo dirtay markab sida gar-gaar – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya usoo dirtay markab sida gar-gaar
Waxaa maalintii shalay dalka Imaaraadka Carabta kasoo shiraacday markab sida 4,259 tan oo gargaar ah, kaas oo haatan kusoo wajahan magaalada Berbera ee maamulka Somaliland.
Gargaarka saaran markabkaasi oo ka kooban 3,819 tan oo cunto ah, 356 tan oo biyo ah, 23 tan oo teendhooyin iyo joodariyaal ah iyo 51 tan oo ka kooban dhar, busteyaal iyo qalabka caafimaadka caruurta ah ayaa lagu qiimeeyay lacag gaareysa Dh10,3 million oo lacagta Imaaraadka Carabta ah.
Waxaa gargaarkaasi laga dejin doonnaa dekedda magaalada Berbera ee maamulka Somaliland, si loogu taageero dadka soo barakacay islamarkaana ay saameeysay macluusha ka jirta dalka Soomaaliya.
Markabkaasi ayaa la filayaa in dekedda magaalada Berbera uu soo gaaro horraanta bisha soo socota ee May.
Dhinaca kale, ololahaan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxa golaha sare ee hay’adda Bisha Cas ee dalka Imaraadka Carabta Sheekh Xamdaan Bin Zaayid Aala Nahyan iyo Ururada kale ee kheeyriga ah ee dalkaasi ka jira.
Dowladda Imaaraadka Carabta waxay ololahaan cusub ugu magac dartay “For Your Sake Somalia” oo la micno ah “Dartaada Soomaaliyeey”, waxaana taakuleyntaasi iyo ololahaan gar-gaarka ah si wadajir uga qeyb qaadanaya, dowladda Imaaraadka iyo shacabkeeda, ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalkaasi iyo hay’addaha ka shaqeeya arrimaha gar-gaarka.
Hay’adda Qaramada Midoobay ee arrimaha gargaarka u qaabilsan ayaa ku qiyaastay in illaa 6.2 million qof Soomaali ah ay haatan u baahan yihiin gargaar cunto, halka 2.9 million qofne ay yihiin kuwa u baahan in lala gaaro naf bad-baadin deg deg ah.